पहिरामा परेर आज एकै दिन १७ को मृत्यु, २८ बेपत्ता! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/पहिरामा परेर आज एकै दिन १७ को मृत्यु, २८ बेपत्ता!
पहिरामा परेर आज एकै दिन १७ को मृत्यु, २८ बेपत्ता!काठमाडौं । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा पहिरामा परेर आज एकै दिन १७ जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य २८ जना बेपत्ता छन्।सबैभन्दा ठूलो पहिरो सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–२ लिदीमा खसेको छ।त्यसगाउँमा मात्रै १० जनाको मृत्यु भएको र अन्य २८ जना बेपत्ता रहेका गृहमन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख मुरारी ओस्तीले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ता भएकाको खोजी जारी छ।